Shiinaha Dhiirrigeliyaha 12oz Cunnoolojiyada Dabiiciga ah ee Dukaanka Dukaanka Madoow iyo Soo-saare | Zhihongda
Boorsada Xayeysiinta ee 12oz Rakhiista ah ee Biyo Madow ee Dukaan Madow
1. AWOOD BADAN: Boorsooyinkan culus ee culus waa weyn yihiin waxayna lahaan doonaan badeecooyin badan, waqti iyo lacagna way kuu reebi doonaan. Cabbirka loo habeeyay waa la aqbali karaa
2. CULIMA-WAAJIB: Xarkaha waxaa loo tolayaa jidka oo dhan xagga hore iyo xagga dambe si ay ugu adkaysato siyaado iyadoo alaab culus la qaadanayo ama sidii caadiga ahayd. Xadhkaha dhererka garabka ayaa ka dhigaya alaabadaada mid fudud,
3.KU SAMEE NASHAAMADO GAAR AH: Ku fiican qurxinta ama ku rinjiyeynta naqshaddaada.
4.MULTI-ISTICMAAL: Boorsooyinkani waxay u fiican yihiin raashinka, xeebta, barkadda, meelaha lagu dalxiis tago, safarka ama sidii maalin walba wax loo iibsado.
5.BIODEGRADABLE: Boorsooyinkani waa kuwo dabiici ah oo beddel u ah tuurista bacaha balaastigga ah.
Magaca Shayga Boorsada Xayeysiinta ee 12oz Rakhiista ah ee Biyo Madow ee Dukaan Madow
Hore: Dib-u-warshadaynta bacda weelka dabiiciga ah ee cudbi-sameynta leh alaab-qeybiyaha xayaysiinta daabacan
Xiga: OEM madhan u astaysto aad logo shopping shiraac bac boorsada
Shiinaha qeybiyaha shiraac boorsada bacda daabacaadda xeebta b ...
Calaamadda caadada ah ee madhan ee dabiiciga ah ee daabacan deegaanka ...
White Madow Madow Dabiiciga Fabric Shoppin ...